माधव समूहका सांसद सामूहिक राजिनामा दिँदै, राजनीतिमा ठूलै उथलपुथलको सं'केत ! - Rising Dainik
काठमाडौँ / नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेकै बेला माधव नेपाल पक्षले नयाँ रणनीति बनाएको चर्चा चलेको छ । माधव पक्षले आ’कस्मिक छलफलबाट आफ्ना सांसदहरुको राजीनामा गराउने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा यही बैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको बेलामा माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरुले सामूहिक राजीनामा दिन लागेका हुन् । एमालेसँग अहिले १२१ जना सांसद छन् ।
नेपाल समूहका २१ सांसदले राजीनामा दिन लागेको जानकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसामु पुगेको छ ।
अन्तत: ओलीकै पक्षमा अदालत, प्रधानमन्त्रीले बि’घटन गर्न पाउने यस्तो बेवास्था !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज : वि.सं.२०७७ साल फागुन १ गते शनिवार हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य